Mampiasa GarageBand Normalization hanitsiana ny fampidiran-tsofina ambany | Martech Zone
Mampiasa GarageBand Normalization hanitsiana ny fampidiran-tsofina ambany
Alatsinainy Oktobra 31, 2016 Douglas Karr
Nanangana mampino izahay studio podcast any Indianapolis miaraka amin'ny mixer digital nomerika sy mikrô kalitaon'ny studio. Tsy manana rindrambaiko manokana anefa aho. Entiko mivantana any Garageband fotsiny ny faran'ny mixer izay anoratako ny input mic tsirairay amina làlana tsy miankina.
Saingy, na eo aza ny fivoahan'ny mixer-ko amin'ny alàlan'ny USB maximised, ny audio dia tsy tonga fotsiny amin'ny volume tsara. Ary ao anatin'ny Garageband dia azoko atao ny mampitombo ny volan'ny làlana tsirairay, fa avy eo tsy manana toerana hanitsiana ny tsirairay mifandraika amin'ny dingana vita aorian'ny famokarana.
Ity misy toa ny audio rehefa voarakitra an-tsoratra. Azonao atao ny mahita ny fahasamihafana izaitsizy eo anelanelan'ny rakipeo roa ambony sy ireo intro, doka ary outros vokarin'ny asa eto ambany. Tsy dia misy efitrano kely ao anaty toerana handaminana azy ireo fotsiny.
Garageband dia manana endrika tiako sy ankahalako - dalàna. Raha tianao ny mifehy ny habetsaky ny podcast ampiasainao amin'ny Garageband, dia halanao izany. Ny normalization dia mitaky ny fanondranana ary manamboatra ny volanao manatsara (mampametra-panontaniana) amin'ny playback.
Amin'ny tranga etsy ambony, azontsika atao ny mampiasa normalization ho tombontsoantsika. Raha tsy mampandeha ny lalana ianao, aondrano ny làlan'ny tsirairay (aiff mba tsy hahavery ny kalitao toy ny mp3) ary ataovy izany isaky ny làlana dia ho ara-dalàna rehefa aondrana. Avy eo azonao atao ny mamafa ny feonao ao anaty làlana tsirairay ao amin'ny tetikasanao, ary manafatra indray ilay rakitra audio efa nivoatra.
Ity ny valiny:
Topazo maso izao ny audio amin'ny feon-kira tsirairay (ireo roa voalohany). Izy ireo dia mifanitsy amin'ny volan'ny tsirairay avy ary afaka ahitsy mora foana mifandraika amin'ny fampidiran-dresaka, doka, outros ary ny tsirairay. Manantena aho fa hanampy anao tahaka ny nanampiany ahy izany! Raha manana fomba fanampiny ianao hanampiana an'ity olana ity dia ampahafantaro ahy.
Tags: aifftenydian-peogaragebandnormalisation garagebandmikrômp3dalànatitres
Ahoana ny fametrahana Google Tag Manager sy Universal Analytics
Apr 8, 2017 ao amin'ny 7: PM PM
Raha mba nisy ny fomba "normailze" alohan'ny fanondranana. Toa dingana fanampiny tsy ilaina.
Apr 9, 2017 ao amin'ny 1: PM PM
Manaiky tanteraka aho, Bram. Raha jerena ny lazan'ny podcasting sy ny hoe mety mila manitsy ny boky mihoatra ny fetran'ny Garageband ianao dia mahasosotra fa tsy manome anao fifehezana bebe kokoa izy ireo. Vao haingana izahay no nanomboka nampiasa Auphonic hahafehy ireo rakitra audio. Tsy lafo izy io, nefa mandeha tsara.